Nhau - Ndezvipi zvakanakira fenzi yedare?
Ndezvipi zvakanakira fenzi yedare?
Zvakanakira fenzi yedare: yakasimba simba uye kuomarara.
Mazuva ano, vanhu vanowanzoona ese marudzi ese esimbi zvigadzirwa muhupenyu hwavo. Ini ndinotenda vanhu vazhinji vanofanirwa kuziva kuti kana uchishandisa simbi yakadaro, iwe uchaona kuti kuomarara kwayo uye simba iri zvakanyanya kwazvo. Kunyangwe yakarohwa nenyundo kana kutyorwa nemaoko, haigone kuchinja chimiro. Kunyangwe ikagona kushandura chimiro chayo, haina kukosha uye inonetsa kuwanikwa neziso rakashama, Simba uye kuomarara kwerudzi urwu rwesimbi zvinhu zvakakwirira, saka simba nekuomarara kwerudzi urwu rwezvinhu zvesimbi zvakada kukwirira. Kunyangwe kana chimiro chayo chichigona kuchinjwa, hachikwanise kutamba chinzvimbo chiri nani chekudzivirira mukushandisa.
Kuisa kuri nyore uye yakasimba plastiki. Parizvino, mafenzi anoshandiswa akagadzirwa zvine hunyanzvi, aine masitayera enoverengeka, izvo zvinoita kuti vanhu vazhinji vade kutenga. Mushure meizvozvo, kumisikidzwa kuri nyore uye kwakaringana kushandiswa kwenzvimbo hombe. Kubudikidza nehunhu uhu, ndinotenda vanhu vanogona kusarudza iyi mhando yesimbi fenzi pavanosarudza girafu. Haisi chete inoverengeka mukugadzirwa, asi zvakare yakachipa.
Iron fenzi ine mikana miviri: yakasarudzika.
Muchokwadi, vanhu vazhinji ikozvino vanosarudza iyi mhando yemidziyo yesimbi kana vachitenga mhando dzese dzemidziyo. Kunyangwe vamwe vanhu vachifunga kuti fenicha yedare inotaridzika zvakanyanya, parizvino, kana ese marudzi emidziyo yemidziyo akaiswa pamwechete, vanogona kuwana imwe yakasarudzika dhizaini. Aya maitiro akafanana neAmerican vafundisi maitiro. Naizvozvo, pakushongedza mhuri, Rudzi urwu rwesimbi fenicha rave iro rega sarudzo kune vanhu vazhinji. Izvi zvakare nekuda kwemaitiro evafundisi veAmerica. Pakushongedza mhuri, mhando yemidziyo yesimbi ndiyo yave sarudzo yega kuvanhu vazhinji. Izvi zvakare nekuda kwechikonzero ichi. Vanhu vazhinji vachasarudza chinhu ichi kana vachishongedza United States.
Iron fenzi ine mikana mitatu: mutengo unonzwisisika.
Pamwe vanhu vazhinji havazive zvakawanda nezve mutengo uye musika maitiro emusika wemari, asi avo vanoteerera zvishoma kwandiri vachaziva kuti mutengo wesimbi ndiwo unodhura pakati pemarudzi ese ezvinhu zvemari, nekuti zviwanikwa zvesimbi zvinogona ive yakachipa kwazvo, nekuti zviwanikwa zvesimbi zvakare zvakapfuma, uye kune akawanda maitiro ekugadzira ese marudzi esimbi zvigadzirwa, Mutengo wezvigadzirwa zvesimbi haugone kunyatsogadziriswa.
Post nguva: Sep-22-2021